Qabiilka miyaa qaldan mise cidda ku qaraabata
Aan ku bilaabo qeexid kooban qabiilka oo u dhigan sidaan:
Soomaalidu mar iyo meel ay joogtayba, marxalad ay mareeysay iyo nooc kasta uu ahaa qaab nololeedkeedu - reer guraa, beeraley iyo reer magaal midba- way qabatimeen oo dhaqangal ka dhigeen “Hayb-sheegashada” qabiilka iyo isla dumiddiisa, asagoo leh muuqaal, xeer iyo had-dhaqan u eg Iskaashato danwadaag ah. Waxaa taa ka marqaati furaya mahmaahda dhaheysa:
“Nin intii dhibtaa tol ma dhibto”.
- Cabdullaahi Ciise Maxamud iyo Xaagi Faarax Cali Cumar.
- Muuse Boqor Cismaan iyo Salaad Cabdi Maxamuud.
- 60 Soomaali ah
- 10 Ajnabi (4 Carab, 4 Talyaani, 1 Hindi iyo 1 Pakistaan).
1- Cabdullaahi Ciise Maxamuud - Banaadir
1- Haji Muuse Boqor Cismaan - Bari
2- Haaji Faarax Cali Cumar - Mudug
3- Sheekh Cali Jumcaale Barale - Hiiraan
4- Maxamud Cabdinur (Juuje) - Jubada Sare
5- Salaad Cabdi Maxamuud - Jubada Hoose
Hal-beegga xulasho ee shaqsiyadka kugu matalaya xilalka kala duwan, sida: Dhaqanka, Maamulka iyo Siyaasadda - ha ahaado aqoon, karti iyo hufnaan.
“Dalkaygu ka yar mid dawlado yaryar Imaaraad ah loo kala qaybiyo; dadkiisuna ka hanweyn gacan hoorsiga asaagiis”.